Fofifa-OCP-Oniversite Mohamed VI: tsinjovina ny tantsaha - ewa.mg
News - Fofifa-OCP-Oniversite Mohamed VI: tsinjovina ny tantsaha
seha-pamokarana maro ny Coronavirus. Ho fitsimbinana ny tantsaha no
nahatonga ny Fofifa miara-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka avy
Nampahafantarina ny faran’ny
herinandro teo ny tetikasa iarahan’ny Fofifa sy ny Fondation OCP
(Office chérifien des phosphates) any Maroka ary ny
Oniversite Mohammed VI Polyteknika any Maroka. Tanjona ny hiarovana
ny tantsaha sy ny mponina any ambanivohitra, manoloana ny
Coronavirus. Mitentina 87.600.000 euros ny famatsiam-bola avy
amin’ny fondation OCP. Miara-miasa amin’ny lafiny teknika ny
oniversite Mohamed VI sy ny Fofifa.
Nilaza ny tale jeneraly, ny Pr
Razafinjara Aimé Lala, fa hisy ny fanentanana ny tantsaha hiadiana
ny coronavirus. Omena toromarika izy ireo, ny fepetra hatao
hisorohana ny aretina rehefa miasa. Tsy tokony hatao intsony ny
mandrora amin’ny zaran’angady rehefa miasa tany ohatra satria
mampiely ny otrikaretina. Eo koa ny fandaharana sy fanentanana any
amin’ny radio any ambanivohitra. Faritra dimy (Analamanga, Itasy,
Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Atsinanana) no hisitraka ity
Manjaitra arotava sy
tale siantifika Fofifa fa hizarana milina fanjairana koa ny
fikambanam-behivavy tantsaha hanamboarana arotava. Eo koa ny
kojakoja, toy ny kofehy, ny ravin-damba 110 metatra sns…
Ampianarina koa izy ireo hanamboatra tsiranoka fanasan-tanana (gel)
sy savony fidiovana.
Efa misy ny tetikasa fanaovana
saríntany sy fitsirihana nofon-tany ho fanatsarana ny fambolena eto
Madagasikara, iarahan’ny Fofifa sy ny Fondation OCP any Maroka.
L’article Fofifa-OCP-Oniversite Mohamed VI: tsinjovina ny tantsaha a été récupéré chez Newsmada.
Nosakanana sy nosavain’ny polisy ny lehilahy telo nampiahiahy nandalo tao ambadiky ny kianjan’ny Maki Andohatapenaka, tamin’ny afak’omaly maraina. Nahatratrarana rongony iray fonosana lehibe ny entana noentin’izy ireo. Fantatra fa 500 ariary no nividianan’izy ireo ny fonosana iray amin’io zava-mahadomelina io ary hamidiny arivo ariary avy eo. L’article Fahatrarana rongony est apparu en premier sur AoRaha.
Ahiahy famonoan-tena :: Zandary iray hita faty, voatifitra teo amin’ny lohany
Tombanana ho namono tena tamin’ny alalan’ny tifitra basy nataony ihany ny zandary iray kilasy voalohany, Randrianarivony Rivomanantsoa Dina, tamin’ny alin’ny sabotsy 27 avrily tokony tamin’ny 11 ora sy 50 minitra, tany Ankalalo-Beravina any Morafenobe. Araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana dia ahiana ho olana teo amin’io zandary io sy ny vehivavy iray niara-nipetraka taminy no niafara tamin’izao mety ho famonoan-tena izao. Tamin’alahelo no nahitan’ ireo namana mpiara-miasa amin’ity zandary namoy ny ainy ity ny zava-nisy tao an-tokantranony tamin’io alina io. Niditra teo amin’ny tendany ny balan’ny basy “kalachnikov” niantefa taminy ary nivoaka teo amin’ny lohany. Nihosin-drà ny tao an-trano nisy ny loza. “Mbola namita iraka ilay zandary tamin’io alina io, ka izay no nitondrany basy tany aminy”, hoy ireo zandary mpiara-miasa tany aminy. L’article Ahiahy famonoan-tena :: Zandary iray hita faty, voatifitra teo amin’ny lohany est apparu en premier sur AoRaha.
Alaotra : Kubota sisa izao mameno tanàna
Mifanandrify amin’ny filan’ny maro anisa ny zava-bitany, amin’ny ankapobeny. Ankehitriny, tsy ahazoana trakitera, toy ny taloha, izany intsony ny vidin’akotry ankehitriny, 800 Ar ny kilao. Ezahin’ny rehetra sisa izao ny hananana kubota. Tsy sarotra loatra koa ny mekanikany, tsy misy garazy mpanamboatra izay simba, toy ny fiara. Mahavita asa maro eny an-tanimbary anefa izy io. Azo itaterana entana betsaka sy isan-karazany. Raha misy fahoriana, reharehan’ny fianakaviana ny hamaroan’ny kubota mitondra mpandevina. Tsy itakiana fahazoan-dalana, toy ny mitondra fiarakodia, izay mitondra kubota fa fanamarinana alaina amin’ny mpampianatra mitondra fiara fotsiny.Tombanan’ny Foibem-paritry ny Fambolena ho 4 000 ny isan’ny kubota ao anatin’ny distrikan’Ambatondrazaka sy ny distrikan’Amparafaravola. « Mihoatra ny zato ny lafonay isan-taona », hoy ny ao amin’ny tranombarotra iray. Toerana dimy ny mivarotra azy ao an-tanànan’Ambatondrazaka. « Ny mahagaga, rehefa hiditra ny fahavaratra, novambra, desambra, izany hoe, maitsoahitra, kely vola ny tantsaha vao tena mandeha be ny tsena ! ». Marobe ireo kubota, mpitatitra tany, mpitatitra entana… ao an-tampon-tanànan’Ambatondrazaka. Mirefarefa izy ireny mandeha ka miteraka fahatsentsenan’ny fifamoivoizana. Efa namoaka didim-pitondrana ny kaominina: vao maraina sy ny faran’ny tolakandro ny fahazoana mampiasa azy ao an-tanàna. Tsy voahaja anefa izany! Nasiana izay fanajariana ny fitsipi-pifamoivoizana izay, saingy tsy mbola ao itony kodiaran-telo itony. RarivoL’article Alaotra : Kubota sisa izao mameno tanàna a été récupéré chez Newsmada.
TSIPY KANETIBE :: Notebahin’ireo tompondaka eran-tany ny Federasiona
Ifamaliana ny fitenenana an-gazety ho an’ny Federasiona sy ireo mpilalao voahosotra ho tompondaka eran-tany miaraka amin’ny mpanazatra nasionaly. Taorian’ny nanambaran’ny Federasiona fa “manala baraka ny Federasiona tsy manana porofo i Dollys Randriamarohaja” ary omen’izy ireo 48 ora hitondrana porofo, dia nitondra fanazavana momba izany ity mpanazatra nasionaly ity sy i Tita Razakarisoa, mpilalao isan’ireo tompondaka eran-tany tamin’ny taona 2016, tetsy amin’ny kianjan’ny CBT Mahamasina, omaly. “Manana porofo izahay matoa miteny. Isan’ireo tsy fahombiazan’ny fitantanan’ny Federasiona ny tsy nananan’ireo mpilalao juniors sy vehivavy kanetibe noentina tany Chine, nandritra ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany. Toy izany ihany koa ny tsy nandoavan’ny Federasiona ny saram-pivahinianana tany an-toerana raha tsy norahonan’ny Federasiona iraisam-pirenena hoesorina amintsika ny anaram-boninahitra azon’ny sokajy seniors lehilahy”, araka ny nambaran’i Dollys Randriamarohaja. “Mbola tsy fahaiza-mitantana ihany koa matoa ny zoma mialoha ny talata andro niaingana ho any Tonizia vao niteny taminay ny Federasiona fa tsy afaka mandeha hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika izahay raha tsy mahita vola 45 tapitrisa ariary. Niezaka izahay nitady, na dia tokony ho anjaran’ny federasiona aza ny mitady izany, ka nahita”, hoy hatrany i Dollys. “Manginy fotsiny ireo fampanantenana poak’aty natao taminay ary saika tsy nanomezana ny vola 10 tapitrisa ariary nampanantenan’ny minisitera anay ary efa nomeny ny Federasiona saingy tsy nety azonay mihitsy izany”, hoy hatrany izy. Nanaporofo izany ihany koa i Tita fa “tsy mety azo ny tamby nampanantenain’ny Federasiona” azy ireo tamin’ny naha tompondaka eran-tany. Mbola tantara mitohy izany ny azy ireo ato ho ato. L’article TSIPY KANETIBE :: Notebahin’ireo tompondaka eran-tany ny Federasiona est apparu en premier sur AoRaha.
Famahana olana ny any Atsimo: hametraka ny paikady maharitra iadiana amin’ny kere ny filoha
Nidina avy hatrany any ifotony, nihazo ireo kaominina ianjadian’ny kere ny filoha Rajoelina Andry, ny faran’ny herinandro teo. Velom-panantenana tanteraka ny vahoakan’ny faritra Androy tamin’izany. « Hisy ny paikady sy fandaharanasa maharitra hapetraka aty ka anisan’izany ny fitarihana rano amin’ireo renirano manodidina », hoy ny filoha tamin’izany. Eo koa ny tetikasa antomotra ezaka amin’ny hanaovana lava-drano maromaro ary hojerena ihany koa ny renirano ao Ifaho ka haparitaka araka izay azo atao, hisitrahan’ny vahoaka rano fisotro. « Hatsangana ny ivontoerana ho entina hanampiana ara-tsakafo sy ara-pahasalamana ireo olona tena marefo na ny “centre nutritionnel intensif et medical” ka hisitraka izany ny distrika efatra, ahitana an’ i Amboasary Atsimo, Ambovombe, Tsihombe ary i Beloha. Hanampiana ireo zaza sy ireo hita fa tena tsy ampy sakafo ka hisy ny fanaraha-maso akaiky azy ireo ary hanaraka “programme nutritionnel” izany », hoy ny filoha Rajoelina.Esorina ireo tsy mahavita azy…Nahitsy ny lahateny tao Tsihombe . Homena fitaovana entina miasa izy aloha. Avy eo vao sazina raha tsy mahavita ny asany. Aoka hiasa tsara fa esorina amin’ny toerany ireo tsy mahavita ny andraikiny, araka ny nambarany.Natolotra tamin’izany ny fiara tsy mataho-dalana 4×4 ho an’ny Prefet ao Ambovombe sy ny – kamiao fandraofam-pako miisa dimy ho an’ny any Tsihombe ary ny vatsy tsinjo. « Hahazo izany avokoa ny isan-tokantrano, indrindra ireo tena marefo. Homena fitaovana na “kit scolaire”daholo ireo mpianatra ao amin’ny EPP rehetra eto Tsihombe ary hisitraka EPP manara-penitra ihany koa », hoy ny filoha.Androy tsy maintsy mandroso…Nampanantena kianja manara-penitra ho an’i Tsihombe ny tenany ary nanolotra « ambulance » tsy mataho-dalàna iray sy fitaovana ao anatiny ary “carte carburant” ho an-dry masera. Teo koa ny fandriana sy fanampiana maro samihafa. Nanolo-kevitra ny filoha mba hametrahana ilay ivontoerana na “centre nutritionnel et medical”ao amin-dry masera.« Tsy ho Tsihombe tara lava (TTL) intsony fa “Tsihombe tsy maintsy mandroso” manomboka izao. Androy tsy maintsy mandroso », hoy ny filoha.Synèse R. L’article Famahana olana ny any Atsimo: hametraka ny paikady maharitra iadiana amin’ny kere ny filoha a été récupéré chez Newsmada.
Akoor’digue sy ny CUA: fotodrafitrasa maro no nohavaozina sy naorina
Na teo aza ny valanaretina covid-19 nitondra fahasahiranana ho an’ny orinasa maro. Tsy nataon’ny Akoor’digue Centre commericial tsy hanao zavatra akory izany. Nisy ny zava-bita… Niova endrika ny eny amin’ny lalana vahilava na ny « digue » mihazo an’Ivato. Nisy ny fanatsarana ireo fotodrafitrasa eny an-toerana notontosain’ny Akoor’Digue Centre Commercial niara-niasa tamin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) sy ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany. Nohamafisina tamin’ny alalan’ny rary vato ny sisin’ny « digue », miainga eo amin’ny kianjan’ny Maki ka hatreny amin’ny hopitaly Manara-penitra. Napetraka ihany koa ireo jiro miisa 20 mahery mandeha amin’ny herin’ny masoandro mba hisorohana ny tsy fandriampahalemana amin’ny alina eny amin’iny lalana iny. Fanitaran-dalana (voie de dégagement en pavé) mba hisorohana ny fitohanan’ny fifamoivoizana eny amin’iny faritra iny izany. Natsangana ihany koa ny toerana ahafahan’ny olona mipetraka miandry ny fandalovan’ny « Bus » na ny « abribus » manara-penitra ahitana jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro, izay hirehitra hariva mandra-maraina. Novelomina ihany koa ireo fampahafantarana ny fitsipiky ny fifamoivoizana misoritra amin’ny tany na ny « marquages au sol ». Nasiana ihany koa ny « trottoir » voaaro amina andrim-bato iva ho an’ny mpandeha an-tongotra.Ankoatra ireo asa, izay nampahafantarina, omaly, ny fahavitany, nomarihin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny Akoor’digue ihany koa fa mitohy hatrany ireo hetsika efa nataon’izy ireo hatramin’izay. Anisan’izany ny fampiasana ny toerana ahafahana mialavoly. Ny fanatanterahana ny Halloween ny 31 oktobra, ny « Black Friday » ny 27 ka hatramin’ny 29 novambra izao, sns. Nampatsiahivin’ny tompon’andraikitry ny serasera sy ny « marketing » eo anivon’ny Akoor’digue ihany koa ny fitsanganan’ireo orinasa sy sehatra vaovao eo amin’ity « Centre commercial” ity. Anisan’izany ny KFC, ny Ymagoo, ny Geox : chaussure, sns.HaRy RazafindrakotoL’article Akoor’digue sy ny CUA: fotodrafitrasa maro no nohavaozina sy naorina a été récupéré chez Newsmada.